WEPỤTARA ọkọlọtọ | Apg29
WEPỤTARA dabeere na izo ya ezo, digital asambodo na digital signatures (nke kwekọrọ signatures na mgbe kaadị ịzụrụ).
WEPỤTARA achọ ụfọdụ software arụnyere na kọmputa. Mgbe asịwo jupụtara ha digital shopping nkata ma họrọ "na-akwụ na n'aka kaadị" na-ewe dị iche iche na nkwukọrịta. Asambodo na-zitere azụ na-apụta, a sọrọ digital akwụ iwu na-kere na-nyere akara nke ụlọ akụ e mere. N'ihi na izo ya ezo igodo na-ebilite na ụlọ ahịa otú e nwere a na-akpọ mgbọrọgwụ igodo niile ọrụ na a na-wuru n'ime software.
WEPỤTARA bụ a oru ngo na a zuru ụwa ọnụ ọkọlọtọ-akwụ na ntukwasi-obi na n'aka kaadị na Internet. Ọ bụ tumadi banyere electronic azụmahịa na ugwo ego. Oru ngo-a malitere ke ufọt ufọt 90s. The acronym anọchi Secure Electronic Azụmahịa nke na Swedish bụ ala electronic azụmahịa. Behind ọkọlọtọ e kere ndị nnukwu ụlọ ọrụ ndị dị otú ahụ dị ka Visa, MasterCard, IBM, Microsoft na Netscape. Mgbe ọ bụ a pilot ngo abuana si Sweden ụfọdụ nnukwu mmiri na Postal Giro.
WEPỤTARA dabeere na izo ya ezo, digital asambodo na digital signatures (nke kwekọrọ signatures na mgbe kaadị ịzụrụ). Nka na ụzụ Data kere a na-akpọ virtual ( "wuru") kaadị gụnyere ndị na-dijitalụ akwụkwọ na site ezoro ezo na nọmba kaadị na-zitere. Ọ bụ mmiri na ike Verisign onye ịchịkwa na nke asambodo ma kaadị ọrụ na ulo. Verisign bụ a subcontractor na show. Ahịa dị iche iche asambodo nwere ike iji tụnyere ugwo stampụ ya gara aga na-eji mgbe na-eme ka a nsiputa maka kaadị zụọ.
Cyber ​​Cash enyerela ịzụlite WEPỤTARA nakwa nwere a yiri usoro akpọ SIPS. WEPỤTARA na CyberCash na-eji otu ụdị izo ya ezo. Verifone bụ ihe ọzọ na ha gbara agbata obi na ụlọ ọrụ ndị na-eji WEPỤTARA ọkọlọtọ, na nke ahụ bụ mgbe ọ na-nwalere. Na WEPỤTARA na yiri usoro, i nwere ike nyefee ego n'etiti ndị mmadụ n'otu n'otu, dị ka mba na-agbalị iji gbochie ego Laundering na dị ka. Dị ka ukwuu ọzọ cashless wee jiri WEPỤTARA ghara obere ụgwọ n'ihi na nke elu management-akwụ ụgwọ.
Computers na kọmputa ụlọ ọrụ - na electronic ụwa nke ego spain
Ọ bụ na '50s dị ka mmiri ji nwayọọ nwayọọ malite iji kọmputa na telekomunikashions technology na ha arụmọrụ. Ụfọdụ echiche ọbụna n'oge ahụ na a cashless usoro agbasawo gafee United States nke ga-ike jikọrọ ihe njirimara. Ha kpọrọ ya mee ihe n'ọdịnihu usoro EFTS (Electronic Funds Nyefee System). Ma, ọ bụ n'oge '60s dị ka nmepe metụtara kọmputa malitere n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Ọ bụ akụ n'etiti oru ike vurmade maka computerization na na a na mbụ ogbo. Otu bụ John Reed na Citibank (nke e mesịrị onyeisi oche nke osisi e) bụ onye mere ihe dum alaka wee akpaghị aka.
Nke a computerization ịnụ ọkụ n'obi n'etiti n'etiti oru e bụghị nanị na United States. Ọbụna Spain, na-arụ ọrụ ha n'ime ihe a na-akpọ COAS (Commission of Operations na akpaaka). Otu n'ime ihe mbụ ule na United States nke nzi ịkwụ ụgwọ jikọrọ a ụdị ID kaadị e mere na 1967 na Wilmington edu Bank of Delaware. Ọ bụ IBM mbụ mepụtakwara magnetremsetekniken na okwu a kọwaworo dị ka "a onyinye si IT ụwa na ụwa nke ụlọ akụ."
Na Sweden ego Promotion nke na-eduga onye Sven G Svensson n'oge akwado maka computerization nke ego anoghi n'ulo oba. Dị ka n'oge dị 50th na narị afọ ẹkenịmde kwa afọ ogbako ke Saltsjöbaden metụtara ụlọ akụ computerization. 90s bụ afọ iri mgbe Internet banyere achụmnta ego. Companies mgbe malitere na omume ndị ọzọ ma na-emecha ghọọ isi kọmputa ụlọ ọrụ. Ndị a na-ahụ mgbe merged n'ime nnukwu ụlọọrụ Refeyim.
Burroughs bụ ndị dị otú a nnukwu kọmputa ụlọ ọrụ, na mesiri ike na ichekwa ego na bank ụwa. Burroughs wuru gụnyere ngwa. Nke a bụ mba usoro maka nkwurịta okwu n'etiti obot. A gara aga nnukwu onwe ha ụlọ ọrụ ndị Sperry. Burroughs director Michael Blumenthal, ịga nke ọma 1986 ka jikota Burroughs na Sperry ka Unisys. Blumenthal ama nwekwara mbụ na Finance Minister.
Ihe ọzọ dị mkpa mere eme na ụlọ ọrụ na a na-ekwu, Remington Rand. Unisys azụmahịa ka mejupụtara, gụnyere ndị ọzọ na-anọgide na-arụ ọrụ na ngwa, nke na-elekọta a nnukwu usoro RFID-akpado containers maka agha n'ihi. RFID bụ a technology na Site n'ibu obere ozi iji redio ebili mmiri. Dị ka anyị ga-ahụ, site na ike nke akwụkwọ bụ na, na okwu nke RFID ọtụtụ na ndị cashless ọha mmadụ. Microsoft na-arụ ọrụ usoro na-eji na ATMs ama na e kwuru okwu ya. The Linux arụ ọrụ usoro nwekwara e eji na ndị a, ọtụtụ ndị Internet na sava na ibu sistemụ kọmputa na supercomputers.
Ọzọ ụlọ ọrụ na ihe atụ, Finland na Sweden ifịk IT ụlọ ọrụ Tieto ihe ndị ọzọ syssIar site kaadị issuance na multiple obot. Facebook na-arahụ n'ime ugwo ụlọ ọrụ kpọrọ ihe. The ụlọ ọrụ na-ulo oru a virtual (o ma ọ bụ ọbụna wuru) ego na 2011 na ihe egwuregwu kọmputa ụlọ ọrụ
kpọgidere ozugbo on. Facebook na-zubere 500 nde ọrụ ga-enwe ike ịkwụ ụgwọ site kaadị via chatappen ozi. Iji a chat software pụtara na ị na "okwu na ederede." Ọ na-eziga ahịrịokwu n'etiti ha nwayọọ nwayọọ (lee ekwentị okwu), n'adịghị e-mail na mgbe mail.
Facebook Umuihe a ngwá ọrụ fraudsters, dị ka na-eke a Ica -like n'akụkụ site na nke na ụfọdụ na-apụnara ndị mmadụ puku kronor site ọkọdọhọ uru na a mpi. Nke a nwere ike ime nke a site obon data na ụlọ akụ igbe. Company Apple emeworo a nnukwu database kaadị data maka ahịa ndị nwere kaadị. The kọmputa ụlọ ọrụ chọrọ a cashless otu bụ obere n'ihi na ọ na-ọma njikọ aka ha na ngwaahịa. The ọzọ cashless ndị ọzọ kọmputa.
Dị ka onye na-agụ eleghị anya chepụtara n'ihi asụsụ, ọ dịghị 20 afọ dere, sị akwụkwọ a. Na-arụ ọrụ na kọmputa na otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ n'ihi na ezi a afọ ole na ole. Olee otú ochie m, M ga-adịghị, Otú ọ dị, e kwuru okwu n'ihi na nke nzuzo ihe. A n'amaghi nke onye iaktagelse. Ọ ga-ewe a ndụ, na ide nke fọrọ nke nta ọkara akwụkwọ a tupu m ga-abịa gafee otu na-adịghị mma mmeghachi omume kwupụta na cashless otu site na kọmputa ụlọ ọrụ n'akụkụ. Ma ọ bụ banyere ihe mere ihe fọrọ nke nta ka afọ 50 gara aga. Taa kọmputa ụwa adịghị ka emeela ha nwee uche ziri ezi na hụrụ otú na-adịghị mma na cashless ọha mmadụ.
Ewezụga bụ banyere otu nwoke aha ya bụ Paul Armer si RAND Corporation, na-ama na afọ 60 elu-profaịlụ nsogbu nzuzo gburugburu cashless ịkwụ ụgwọ. O kwuru banyere nke a na United States maka otu. Anyị ga-mkpa karịa otú ahụ ndị ikom na ndị inyom na kọmputa n'ụwa taa. E nwere n'ezie oké egwu mbụ akụ ndị mmadụ. Ma ebe bụ nnyocha si kọmputa ụwa? Armer ekwu ọbụna wepụ aha si ndia ka na, ruo n'ókè ụfọdụ nwere ike ịmata ndị mmadụ na.
Na ọrụ ya mkpa Armer na oge, na-data na ụgwọ ọrụ na kọmputa ụlọ ọrụ. Nke a bụghị na ọ mere a azụmahịa na ntụmadị kaadị ụlọ ahịa data na ihe ọ na-akpa echiche na-amaghị aha ụzọ. The data ẹkewetde nanị nke ụgwọ, agụmakwụkwọ na a oké njọ ala kewaa atọ ebe. Mgbe Paul Armer mgbe ota ihe na iji ya, ọ pụrụ ozugbo (nke e bu n'obi site na mbu) ịhụ onye ọ bụ banyere onye nwere kasị elu ụgwọ ọnwa. Nke a bụ mmalite nke ya nkwa na mkparita uka nke nzuzo vesos n'ọdịnihu ike n'ezi ihe nke na mpe banyere cashless ịkwụ ụgwọ.
Ikekwe, ihe kasị mkpa njikọ n'etiti kontantlöshet na kọmputa bụ na ha bụ ndị cashless-akpọ e-ego, ma e wezụga na-echekwara na emere kaadị a na-echekwara na kọmputa na sava n'ụdị a na-akpọ network ego. Ọ bụrụ na ị na-atụle otú obi erughị ala na kọmputa, otú eleghị anya ọ kama ga-odi mfe ịkwụsị nrugharị Hamster onu.
N'ihi na ndị na naanị otu onye na-mmasị na kọmputa, m nwere ike ikwu bụghị ịzụta a na kọmputa. Ị zụrụ a na kọmputa nanị n'ihi na ọ pụrụ ịbụ mma nwere mgbe ụfọdụ. Ị pụrụ ibi enweghị. Ọ bụ otu ụkpụrụ dị ka bụghị ịzụta a ụgbọ ala na-na-fọrọ nke nta dị guzo-arụzi ụgbọala. N'ihi na kọmputa ụlọ ọrụ na-esi ọnwụ ọzọ na ndị ọzọ na-agbalị foist na anyị kontantlöshet na Big Nwanna otú ha ga-ere dị ka ukwuu na kọmputa dị ka ha chọrọ. Ọ bụkwa nnọọ uru na fun ihe na-eme na a na kọmputa. A nnukwu ihe mere m ka na ịnọgide na-na kọmputa bụ dee akwụkwọ ndị a. The kọmputa bụ magburu onwe dị ka ọbá akwụkwọ, nkumigwe na ọcha ji egwuri egwu.
Ma m ga-eme ihe n'eziokwu, na m nwere mmasị na kọmputa nwụrụ a nta onye ọ bụla na oge ọ bụla m dere n'akwụkwọ a. Otu ihe doro. Ọ bụrụ na ngụkọta cashless otu dị n'ahụ anyị, e nwere bụ naanị otu ihe ka nwere ike ikwu. Total na izugbe technology boycott. Ọ bụghị ụdị ihe nwere hushållsabetet ime ma ihe ọ bụla ọzọ nke nwere nkwurịta okwu na ihe ọmụma ọrụ. Ọ bụ ihe na-eme ihe n'eziokwu na ndụmọdụ si na onye edemede n'anya n'ezie technology. Na Ozizi, a zuru ezu nnukwu ele mmadụ anya n'ihu technology boycott egbu kontantlösheten. Ọ nwere ike na-adịghị adị na-enweghị technology. Ego nwere ike ijikwa na-enweghị ọkụ eletrik na technology (ma e wezụga n'ihe gbasara n'ichepụta). Ha mere otú ahụ ruo ọtụtụ narị afọ.
Ọ bụ ezie na m chọrọ ịnọgide na-eji kọmputa otú ọ pụtara na ọtụtụ ugboro m na-eche banyere echiche na nanị ejedebe na kọmputa. Na-eche ihe ndụ ga-adị na-eme ihe na-enweghị. The obodo Monitors na njikwa ụmụ amaala ọzọ na ndị ọzọ site na kọmputa. O yiri ka e nweghị njedebe nke nhụjuanya. Ya mere na agbanyeghị, ị nwere ike nweta a nta ọzọ restrictive, na dị ka mgbe niile na-eche banyere ihe ị na-eme na kọmputa gị.
Mgbe cashless otu ga-n'ụzọ zuru ezu na-egosi ya jọrọ njọ ihu, ma eleghị anya, m ga-chọrọ ka m na-agbakọ bọl na a kpamkpam dị oké njọ atụmatụ ke ebe nwere kọmputa dị ka otu n'ime ndị m ọdịmma. Ma eleghị anya, ga-abụrịrị ụdị ụfọdụ nke agha mmume na ebe na tiwara n'oge home kọmputa na PC na ígwè ọjà. Guzoro n'èzí na mainframe kọmputa emmepe na placards na-agụ "Ọnwụ na kọmputa!". Ma mgbe ahụ, na aka nke ọzọ, eleghị anya ọ bụghị akwụkwọ a wee bụrụ.
E nwere ike ịbụ ndị na-ahụ m dị ka a oru reactionaries. Nke ahụ bụ bụghị ikpe na niile. Ihe m ga-kasị dị ka nwoke na-aga ga-ikwu apịtị cashless okporo mmiri. Iji mee nke a, onye ga-akpa na a ole na ole nzọụkwụ azụ. Ebe ọ bụ na nkà na ụzụ nwere ike n'ụzọ zuru ezu tinye n'ọrụ n'ihi na ihe ndị ziri ezi ọzọ. N'ikpeazụ, ọ pụrụ n'ụzọ dị mfe ikwubi na enweghị mepụtara nke na kọmputa na-agaghị cashless otu bụ na ya kwesịrị ekwesị n'oge a ụdị.
Anyị bụ ndị na-eji ọkụ na-akwụ ụgwọ
Olee kwuru Deputy Gọvanọ Lars Nyberg n'ụzọ nkịtị na a okwu ihu ọha na ndị Financial Sector Union Congress na Balsta na 2008.
"Ọ dị mfe na mbụ echiche kwetara na e nwere ahia na anoghi n'ulo oba bụ ndị ji obiọma na-akwụ maka ịkwụ ụgwọ. Ma, ọ bụ na mfe. Merchants mkpa ka ha na-akwụ ụgwọ kpuchie, ọ bụghị na ha enweghị ike na-eduzi ha ego. Ma otu-aga n'ihi na anoghi n'ulo oba. Ya mere, popping eri niile ego emecha ruo akara na ngwaahịa na ọrụ anyị na-azụta. mmiri ara ehi na akwụkwọ nri nwere ike ịbụ a bit ọzọ dị oké ọnụ na ụlọ ahịa na ego udu a bit belata na akụ karịa na-eribu ịbụ ikpe. mere na ọ bụ na-eji ọkụ na akụ ahịa na n'ikpeazụ akwụ ndị na-eri niile ego. Ma, anyị na-adịghị ahụ ha. ya mere, anyị na-edu kwere na ha bụ - ma ọ bụ na onye ọzọ na-akwụ ụgwọ. "
Ọ we si ya mere, a onye n'ime Riksbank, n'ihi na ozugbo, na gba ọtọ eziokwu. E nwere ndị ahịa na-eji ọkụ na-na-akwụ ụgwọ. Ka anyị zere nsogbu banyere otú ego ego ebubo na ahia na anoghi n'ulo oba. The anoghi n'ulo oba nke, na mberede, na nkezi irite ọtụtụ narị dollar dị ọcha uru kwa Swedish afọ. Otú ọ dị, ị nwere ike ikwu banyere "ogbenye ahia" mgbe ọ na-apụghị na-edebe ha kwa ụbọchị takings n'ụlọ akụ. National Bank chọrọ ka ndị mmadụ na-eji ihe n'aka kaadị-eme ka ọ dị ka erroneously azọrọ ọzọ "aku na uba ezigbo". Nyberg chọrọ ghọtakwara a ma otufuru kpamkpam site na-ekwu eziokwu.
Na a okwu ihu ọha n'etiti afọ 90 bụ mgbe Stefan Ingves bụ osote gọvanọ kwuru, ọ na-agbaso.
"N'ihi na anoghi n'ulo oba, nakwa dị ka outlets iche iche, na-ejizi nke ndetu na mkpụrụ ego dị ka a n'ihi nke småvärdestransaktioner nnọọ oké ọnụ."
"Na a nabatara umu echiche, ọ bụ na-achọsi ike na ndị ọzọ azụmahịa na-eduzi electronically kemgbe si otú taa oké ọnụ akwụkwọ dabeere na nhazi nwere ike n'ihu belata."
Ingves mbụ nkwupụta bụ otú kpamkpam ụgha. Ọ bụ na-eji ọkụ na-adịghị akụ, na ahia na-emecha na-ewe ndị na-eri nke ịkwụ ụgwọ. Na nke abụọ ahụ na-emegide ndị Riksbank nke na-akpọ "na-anọpụ iche". Nke ahụ bụ, na ọ bụ ndị bi na ina ego na-achịkwa ìgwè mmadụ ahụ. Ọ-ekwu ná nkwado Riksbank oghe kontantlösheten.
Ọ bụ eziokwu na ka ma ya onwe ya nwere ike ikpebi ma ọ were ego ma ọ bụ na kaadị akwụmụgwọ. Ma mgbe ndị mmadụ mgbe niile mere ihe site bịara n'ikperé mmiri, media, ụlọ ọrụ gọọmenti na ndị ọzọ Hazie cashless nhọrọ dị ka ọ nwere na psychological uche, wepụrụ a ukwuu nke ndị mkpebi. N'ụzọ dị mwute, ọtụtụ ndị na-dị nnọọ ka na-ezere nsogbu ma ọ bụ mgbe ị na-ụgha duhiere uru zaa. N'ihi na ọtụtụ n'ime anyị ọ bụ kama a mkpali na-eguzogide. The na-eri nke n'aka kaadị na-nọ na nzuzo na-na nnọọ ukwuu nke mmiri na kaadị ụlọ ọrụ. Ke adianade do, naanị mmiri na kaadị ụlọ ọrụ nwere anya na ihe bụ n'ezie na-eme mgbe kontantlösbrott.
Nnukwu akụkụ nke ego ejizi ụlọ ọrụ na-enweghị ihe na ọnụ ọgụgụ na-egosi ma "mara" ma na management "dị nnọọ oké ọnụ." Dị iche iche òtù na ndị mmadụ na-eme mkpesa ilu na "ego njikwa-efu nnukwu echekwara." Dị nnọọ ka na okwu nke n'ezie ịkwụ ụgwọ, ọ bụ anyị, na-eji ọkụ na-emecha na-akwụ ụgwọ ego management. Business nwe-ewe bụghị ego nke ya onwe ya obere akpa, n'ihi na ihe atụ, na-akwụ na ego njikwa, Loomis. Ná mmalite, anoghi n'ulo oba ka ọtụtụ n'ime ụgwọ maka ego na ahia ma n'ikpeazụ, ọ bụ n'ji onye na-akwụ. Ugbu a, anyị guzosie ike ndị na-emecha kwuo ma ịkwụ ụgwọ na ego management. Ọ bụ ya mere oge iji kwụsị ịtamu oruru.
Na ọtụtụ ndị ọzọ e dere na na ịkwụ ụgwọ ga-eri azụmahịa ego. Ọ na-adịghị ọdịiche dị n'etiti ezi na-elekọta mmadụ na-akwụ ụgwọ, azụmahịa-akwụ ụgwọ na onye si n'akpa. Ọ bụ aka ike na-ekwu okwu banyere ihe ọ bụla nke atọ dị iche iche na-akwụ ụgwọ dabere na ihe hụrụ nduhie. The ihe na-mgbe niile kwesịrị ide bụ onye n'ikpeazụ akwụ. Na nke a na-eji ọkụ.